यी हुन् मानिसहरुको ज्या'न बचाउने साहसी नेपाली चेली उद्धा'र पाइलट प्रिया अधिकारी - Sidha News
यी हुन् मानिसहरुको ज्या’न बचाउने साहसी नेपाली चेली उद्धा’र पाइलट प्रिया अधिकारी
उपमिता वाजपेयी/ दैनिक भास्कर
३१ वर्षकी प्रिया अधिकारी नेपालकी एकमात्र महिला उद्धार पाइलट हुन् । प्रिया सगरमाथाको उचाइभन्दा माथिको उचाइमा हेलिकप्टर उडाएर मानिसहरुको ज्यान बचाउँछिन् र त्यहाँ पुगेका सहयोगीलाई सहयोग गर्छिन् । प्रिया डाक्टर बन्न चाहन्थिन् तर एउटा भेटले उनलाई पाइलट प्रेरित गर्यो । उद्धार पाइलटको जुन जिम्मेवारी छोडेर आधा दर्जन युवतीहरु भाग्छन् उनले त्यही करिअर रोजेकी छिन् । प्रिया ३० जना पुरुषको टिममा एक्ली महिला हुन् । उनले ९ वर्षको समयमा सगरमाथाको आसपासबाट १ हजारभन्दा बढीलाई उद्धार गरिसकेकी छिन् । प्रिया अधिकारीसँग गरेको अन्तरवार्ताको अनुवादित अंशः
यस्तो कुनै मिशन जहाँ ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुभएको थियो?
तपाइँले एक पटक सौन्दर्य प्रतियोगितामा पनि भाग लिनुभएको थियो?
हो, क्याबिन क्रु हुँदा म एक सौन्दर्य प्रतियोगितामा गएकी थिएँ । हामी ५ दिदीबहिनी छौं । आमा चाहनुहुन्थ्यो कि एक छोरी ब्युटी क्विन बनुन् । अरु ४ नगएपछि म जानुपर्यो । तर प्रतियोगिता २ महिनामै निस्क्रिय भयो । अब भविष्यको योजना के छ रु म संसारकी सबैभन्दा बुढी पाइलट बन्न चाहन्छु । ६० को उमेरमा पनि म हेलिकप्टर उडाउन चाहन्छु । तत्काललाई स्लिङ अपरेशनको तालिम लिने योजना छ जसमा उडानकै क्रममा डोरीबाट सामान र मानिसलाई ओरालिन्छ ।